Myanmar: RFA discussion on electoral registration errors Uploaded by Myo.Htike.Tan.Thein at Your Listen
Myanmar: RFA discussion on electoral registration errors
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."RFA မြန်မာဌာန | တန ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - Myanmar: RFA discussion on electoral registration errors
Myanmar: Rfa Discussion On Electoral Reg…istration errors
Tags: myanmarburmaburmesemyanmar 2015 general election
RFA မြန်မာဌာန | တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း 2015-06-13
ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု ဆွေနွေးချက်
ဒီတစ်ပတ် အစီအစဉ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲစာရင်းတွေမှာ အမှားအယွင်းတွေ အမြောက်အများ ပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီး
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ တင့်ဆွေနဲ့
ဝါရင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့
ကနေဒါနိုင်ငံက ဦးညွန့်လှနဲ့ ဦးတင်မောင်ထူးတို့ကို
Myanmar: Rfa Discussion On Voters … by Myo.Htike.Tan. ... 00:21:24 524
Myanmar: Rfa Discussion On 2015 El… by Myo.Htike.Tan. ... 00:23:06 688
Molana Swaleh Bodi(myanmar Bayaan-… by rangooni 00:49:10 2155
U Wirathu Doh Myanmar Balle by bakata 01:53:03 4714
Entisar Omer - Medial Errors by MediaProjectSu ... 00:03:30 82